ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်စာအုပ်က ပေးတဲ့ ကြီးပွားကြောင်း (၇) ရပ်
“ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်စာအုပ်က ပေးတဲ့ ကြီးပွားကြောင်း (၇) ရပ်” (၁) ကိုယ့်ဆီ ဝင်လာတဲ့ငွေရဲ့ဆယ်ပုံတပုံကို အမြဲတမ်း ချန်ထားပါ။ (၂) ကိုယ့်ဆီဝင်လာသော ငွေများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲ သုံးစွဲပါ။ ငွေဝင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို သိထားဖို့လိုသလို ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို ဂဃနဏ သိထားဖို့လည်း လိုတယ်။ […]
နှာစေး နှာမွှန် နှာရည်ယို နှာခေါင်းပိတ်တာမှန်သမျှ ငွေမကုန်ဘဲ အမြန်ပျောက်ကင်းနည်း
နှာစေး နှာမွှန် နှာရည်ယို နှာခေါင်းပိတ်တာမှန်သမျှ ငွေမကုန်ဘဲ အမြန်ပျောက်ကင်းနည်း နှာစေး နှာမွှန် နှာရည်ယို နှာခေါင်းပိတ်တာမှန်သမျှ ဒီဝေဒနာဟာ အများအားဖြင့် ဦးခေါင်းကနေရေလောင်းချိုးတာခေါင်းလျှော်တာမှာအခန့်မသင့်ရင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလည်းဆိုရင်အပူတွေအောက်ကိုမဆင်းပဲအပေါ်ကိုပဲတက်နေလို့ပါ။ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီးဆေးနည်းတွေမေးကြပါတယ်ဆေးနည်းတွေထက်ပိုမြန်တဲ့လက်တွေ့ကုထုံးတစ်ရပ်ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆေးနည်းမေးနေတုန်းမှာပဲမိမိကိုယ်တိုင်နှာခေါင်းပိတ်နေခဲ့တာပါ။ ခေါင်းမှာအပူခဲနေလို့ဖြစ်တာအပူထုတ်ရင်ဧကံပျောက်မှာကိုစဉ်းစားမိလိုက်ပါတယ် ဂွမ်းမရတော့အလွယ်တကူတွေ့တဲ့တစ်ရှူးစာရွက်ကိုရေစွတ်ပြီး”နှာတံအပေါ်”ကပ်ထားလိုက်ပါတယ် ။ရေခြောက်သွားတဲ့အခါမှာစက္ကူကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်အပူတွေထွက်သွားပြီးနှာပိတ်တာပြန်ပွင့်ခဲ့ပါတယ် ။ နှာစေးနှာမွှန်နှာရည်ယိုတာလည်းဒီနည်းနဲ့လက်တွေ့ပျောက်ကင်းစေပါတယ်နှာခေါင်းအနံ့မရတာထိပ်ခပ်နာဝေဒနာရှင်တွေလည်းယခုနည်းကိုအသုံးပြုကြည့်စေလိုပါတယ် ။စက္ကူခြောက်အောင်စောင့်စရာမလိုပါlရေခြောက်လျှင်ရပါပြီမိနစ်အနည်းငယ်သာကြာတဲ့ငွေမကုန်ကြေးမကျနည်းလေးကိုဒါနပြုလိုက်ပါတယ်။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ” Credit ဆေးမြီးတိုနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ နှာစေး နှာမှနျ နှာရညျယို […]
ကိုဗစ်​ကာလမှာ ပြန်​စရာလမ်းစရိတ်​ မရှိ​တော့၍ မြစ်ကြီးနားကနေ မန္တလေးအထိ မိုင်ပေါင်းရာချီ ခြေကျင်လျှောက်​ အ​မေ့ဆီပြန်လာခဲ့ရတဲ့ ကိုဇင်လင်း.
တစ်မျှော်တစ်ခေါ် ရှည်လျားလွန်းတဲ့ မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ရထား လမ်းကြီးရဲ့ ဇလီဖားတုံးတွေပေါ် ဇင်လင်း ခပ်သွက်သွက်နင်းရင်း ဖြတ်ကျော်နေတယ်။ ခပ်နွမ်းနွမ်း ပုဆိုးနဲ့ အရောင်လွင့်နေတဲ့အင်္ကျီ လေးတစ်ထည်ဝတ်ထားတဲ့ ဇင် လင်းဟာ ကျောပေါ်မှာ ပီနန်အိတ် လေးတစ်လုံး လွယ်လို့ပါ။ မိုးတွေတဖွဲဖွဲကျနေလို့ မိုးစိုထားတာ ကြောင့် ရထားလမ်းရဲ့ဇလီဖားတုံး တွေက နင်းလိုက်တိုင်း […]
Q ၀င်နေရတဲ့ အဆောင်မှာပဲ လက်ထပ်လိုက်ကြတဲ့ စုံတွဲ
Q ၀င်နေရတဲ့ အဆောင်မှာပဲ လက်ထပ်လိုက်ကြတဲ့ စုံတွဲ မုံရွာမြို့၊ ထန်းတောရပ်ကွက် အသွားအလာကန့်သတ် Quarantine စင်တာတွင် စုံတွဲတစ်တွဲအား မိဘများရှေ့မှောက် လက်မှတ်ထိုး လက်ထပ်ပေးခြင်းအား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မုံရွာမြို့၊ ထန်းတောရပ်ကွက် အသွားအလာကန့်သတ် Quarantine စင်တာတွင် စုံတွဲတစ်တွဲအား မိဘများရှေ့မှောက် လက်မှတ်ထိုး […]
တစ်နေကုန် အလုပ်သွားပြီး ည ၇ နာရီမှ ဆုံတဲ့အိမ်က မီတာကြေး 116000ကျော်ပေးရတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက်
တစ်နေကုန် အလုပ်သွားပြီး ည ၇ နာရီမှ ဆုံတဲ့အိမ်က မီတာကြေး 116000ကျော်ပေးရတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက် EPC က တော်တော်အကုသိုလ်များတာနော်။မောင်နှမ ၂ယောက်လုံး တစ်နေကုန် အလုပ်သွားပြီး ည ၇ နာရီမှ ဆုံတဲ့အိမ်။ TV မကြည့်၊အဲကွန်း ကို ည၇နာရီနောက်ပိုင်းတောင် တစ်ခါတစ်လေမှ […]
လင်ကြီး က အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး—- ဖြစ်ရပ် လင်ကြီး က အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး သတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်…. ထိုင်းနိုင်ငံ SAMRONGTAI ပြည်နယ် OLD RAILWAY RD […]
ကားပျက်လို့ရပ်ထားတာကို ဓားပြတိုက် ရုပ်သံ
ကားပျက်လို့ရပ်ထားတာကို ဓားပြတိုက် ရုပ်သံ တစ်နေ့တစ်ခြားကြောက်စရာကောင်းလာပါပီး။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာဘာလည်းလဲလို့မေးစရာပါ။ ပြည်သူတွေဘ၀ တစ်နေ့တစ်ခြား လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတာ မမြင်ချင်မကြားချင်မှအဆုံးဗျာ။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ။ ဘယ်လိုတွေ အရေးယူဆောင်ရွက်ေ ပးမလဲဗျာ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ ဘယ်လိုမှ မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ခိုးဆိုးလုနှိုက် ထင်ရာလုပ်ခွင့်ရနေကြ၊ ဘာမှလည်းကြောက်စရာမလို အဲလိုတွေဖြစ်နေမှတော့ ဒုစရိုက်သမားတွေလည်း […]
လူစိတ်မရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြီး ရုပ်သံ
လူစိတ်မရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြီး ရုပ်သံ မြန်မာစကားပုံ ရှိသည် ဗူးကောင်းတော့ စင်ခံ၊ လင်ကောင်းမှ စံ ရပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ လင်ဆိုးမယား တဖားဖားဆိုသလို ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ခင် သူ့အြေ ကာင်း သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား အကျင့်စရိုက်တွေ ကိုလေ့လာပါ။ ကိုယ်အနေနဲ့ […]
ဥပဒေ … ကျမနဲ့ ကျမမိသားစုလုံခြုံရေးကို ဘယ်သူတာဝန်ယူပေးမှာလဲ(သို့)ခါးသီးလွန်းတဲ့ သမ္မတလွတ်ငြိမ်းခွင့်
ဥပဒေ … ကျမနဲ့ ကျမမိသားစုလုံခြုံရေးကို ဘယ်သူတာဝန်ယူပေးမှာလဲ(သို့)ခါးသီးလွန်းတဲ့ သမ္မတလွတ်ငြိမ်းခွင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုကို အလေးထားတဲ့ အနေနဲ့ နိုင်ငံတဝှမ်း အကျဉ်းထောင်အသီးသီးက အကျဉ်းကျနေသူတွေကို ပေးခဲ့တဲ့ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဟာ အကျဉ်းကျ သူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် မင်္ဂလာသတင်းတခုပါ။ […]
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လမ်းမတော်မြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ သူနာပြုတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်( တိုးချဲ့) လေးထပ်စာ သင်ဆောင်၏ Sunshade ဆန်းရှိုတ်ပြား ပြုတ်ကျမှု ယနေ့ (မေ ၁၇) ၁၂နာရီ ၁၀ မိနစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လမ်းမတော်မြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ သူနာပြုတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်( တိုးချဲ့) လေးထပ်စာ သင်ဆောင်၏ Sunshade ဆန်းရှိုတ်ပြား ပြုတ်ကျမှု ယနေ့ (မေ ၁၇) ၁၂နာရီ ၁၀ မိနစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “ ပြိုကျတယ်ဆိုတာက အဆောက်အဦ ပြိုတာမဟုတ်ဘူး။ လေထပ်ဆောင်ပေါ့။ အပေါ်ဆုံးမှာ […]